China Rubber zvemapuranga koni irikupa chinotenderera fekitari uye vagadziri | Yuantuo
Inogona kuve yakakamurwa kuita papermaking machira, ekudhinda machira, ekudhinda machira, mupunga husking machira, metallurgical machira uye oiri ekudhinda machira;
Zvinoenderana nepamusoro morphology, inogona kuve yakakamurwa kuita flat roller uye pateni yerabha roller;
Zvinoenderana nezvinyorwa izvi zvinogona kuganhurwa mu: mabutiri machira, nitrile machira, polyurethane machira uye silicone rabha machira.
Cots dzinowanzo kuve dzekunze yerabha dura, rakaoma rabha nhete, simbi musimboti, mupumburu mutsipa uye mweya vent. Kugadziriswa kwayo kunosanganisira jecha kunonoka kwe roll roll, kubatisisa kurapwa, kugadzira gluing, kuputira machira, waya ichitenderera, kurapa mu vulcanizing tank uye pamusoro pekugadzirisa. Cots dzinonyanya anoshandiswa papermaking, kudhinda uye värjäys, kudhinda, tsanga kugadzira, simbi, mapurasitiki kugadzira, etc.
* Kudhinda machira mumuchina weoffset kunonyanya kuendesa inki. Naizvozvo, mazuva ese ekuchenesa machira anofanirwa kunyatsocheneswa, zvikasadaro iwo machira ekumusoro akaturikidzana uye pigment, resin iri nyore oxidized kuti iite yakatsetseka uye yakaoma firimu, zvichikonzera pamusoro pevitrification uye kukanganisa iyo inki kuchinjisa. Kana isina kucheneswa nguva dzose, iyo pamusoro peCOTS ichave isina kuenzana kwenguva yakareba, zvinozokanganisa mashandisiro acho. Naizvozvo, iwo machira anofanira kucheneswa uye kuiswa padivi kana muchina wamiswa.
* Mukushandura kweoffset, nekuda kweiyo "mvura hombe inki hombe" inki emulsification, mune yakatsetseka kamubhedha pakuumbwa kwehydrophilic base, ita kuti iite deinking. Mhinduro ndeyokufoshora iyo inki yakasungirirwa, kugeza Makoti anonamira nepeturu, kuikuya ne5% sodium hydroxide solution uye pumice powder, uye kurapa simbi roll (kana yakaoma roll) nenzira. Yakaomarara roll inogona zvakare kuve iri mamiriro ekumwaya mvura, ine yakanaka mvura jecha kukuya, teerera kuti usagare munzvimbo imwecheteyo, zvikasadaro zvinokuvadza iwo machira. Iyo yakakosha nzira ndeye kudzora iyo pH kukosha kwebhakiti mvura uye kuita basa rakanaka reinki chiyero.
* Cots anoshandiswa akareba kukwegura, pamwe nemakemikari kukukurwa, zvichikonzera kuora kunama kubva "slag", machira akadaro haashandisi, kana kukanganisa zvakanyanya kunaka kwekudhinda.
* Kuti uve nechokwadi chekuti kugadzirwa uye mhando yekudhinda haina kukanganiswa, kune eparutivi ingi ma roller, asi usachengete zvakawandisa kudzivirira kukwegura. Iyo yekuchengetedza nharaunda yeCOTS yakafanana negumbeze. Pamusoro pezvo, machira anofanirwa kunge ari muchimiro chakatwasuka pamagazini, uye pamusoro haifanirwe kusangana neayo kana zvimwe zvinhu, kuti zvidzivise deformation yemachira.
* Mibhedha haifanire kuchengetwa padhuze nemagetsi makuru nemagetsi. Nekuti yakawanda ozone inogadzirwa nemidziyo iyi ichaita pamusoro peCOTS kuchembera uye kutsemuka.
* Kana mamiriro ekunze ari kutonhora, iyo inki haina kuenzana, unogona kuwedzera zvekubatsira zvinhu muingi zvakanaka. Izvo zvinorambidzwa kubheka iyo ink Cots ine infrared hita uye mimwe michina yekudzivirira iwo machira kubva kune oxidation.
Pashure: Grooved cône chinotenderera
Zvadaro: Stainless simbi koni chinotenderera